Hlola Ngaphesheya Kwamadivayisi kalula nge-Adobe Shadow | Martech Zone
Hlola Amadivayisi Wonkana Kalula nge-Adobe Shadow
NgoMgqibelo, Ephreli 28, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Uma wake wahlola isayithi kuzo zonke iziphequluli zeselula namathebulethi, kungaba okubili nokuthatha isikhathi. Ezinye izinkampani zize namathuluzi okulingisa ukunikezwa kumadivayisi, kepha akufani neze nokuhlola kudivayisi uqobo. Bengifunda Umagazini weWeb Designer namuhla futhi ngithole ukuthi i-Adobe yethule shadow, ithuluzi lokusiza abaklami babhangqe futhi basebenze namadivayisi ngesikhathi sangempela.
Uma uthi nhlá, angizange ngihlabeke umxhwele ngomshini wokuvumelanisa… ubani onendaba nokuthi ngingachofoza kusayithi bese ngiba nawo wonke amadivayisi abhanqiwe ashintshela kulelo khasi. Isici esihle ngempela; kodwa-ke, yikhono lokubuka nokusebenzisa umthombo womkhiqizo ngamunye ngqo kusuka kudeskithophu yakho. Lokhu kuzokwenza noma yimuphi umklami akwazi ukuxazulula inkinga kalula futhi aphelelise ukwakheka kwawo.
Kubaklami abafaka ukwakheka okuphendulayo, lokhu kuyasiza kakhulu! Idizayini ephendulayo ilungisa usayizi wedivayisi yakho kunokumane ukhombe isiphequluli kutimu ehlukile noma ishidi lesitayela. Ziya ngokuya zithandwa kakhulu embonini. Ngemininingwane engaphezulu, ungafunda i-athikili ku- I-Smashing Magazine ku-Web Design Ephendulayo.
Thwebula I-Adobe Shadow ye-Mac noma iWindows. Futhi kudinga ifayela le- Ukwandiswa kwe-Google Chrome nohlelo lokusebenza oluhambisanayo lwedivayisi yakho ngayinye.
Tags: isithunzi se-adobeukuhlolwa kwesiphequluliisiphequluli se-ipadukuhlolwa kwe-ipadisiphequluli seselulaukuhlolwa kwesiphequluli seselulaumklamo ophendulayosafariukuhlolwa kwethebhulethi
Ukuphakama Kwama-Visual Social Networks